Sanad-guuradii 3aad ee Madaxweyne Farmaajo waxay ku soo aday Safarka Addis Ababa - Awdinle Online
Sanad-guuradii 3aad ee Madaxweyne Farmaajo waxay ku soo aday Safarka Addis Ababa
February 8, 2020 (Awdinle Online) –Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa goor dhow u ambabaxay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, wax yar kaddib markii uu saxiixay Sharciga Batroolka.
Safarka Madaxweyne Farmaajo ayaa ku soo aaday, iyadoo maanta ay ku beegan tahay 8-da February 3 sano guuradii ka soo wareegatay markii loo doortay xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Ka hor inta aanu Madaxweynuhu ka dhoofin garoonka waxaa loo xiray wadada ka baxda Madaxtooyada, hor marta Dekeda Muqdisho illaa School Polizio.
Madaxweyne Farmaajo ayaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya uga qeyb galaya shir madaxeedka Midowga Afrika ee sanadlaha ah.
Xilligii uu Ololaha ku jiray Madaxweyne Farmaajo waxaa uu Madaxdii ka horeysay ku eedeyn jiray safarada badan ee dibadda iyo jidadka xiran ee magaalada, hase ahaatee si taas la mid ah ayuu qaaday dhaqankii uu madaxdii isaga ka horeeyay ku eedeyn jiray.
Previous articleAqalka Sare oo ansixiyay Sharciga Doorashooyinka Qaranka
Next articleDuqeyn ka dhacday goob ay maamulan dagaalamayaasha al- Shabaab